Super Mario Run no lalao voalohany natokana ho an'ny mpampiasa Android an'ny Nintendo. Iray amin'ireo mpilalao malaza indrindra amin'ny orinasa Japoney, izay azonao lalaovina amin'ny findainao manokana. Lalao iray izay efa alaina an-tapitrisany nandritra ny fotoana lava ny fampidinana ao amin'ny Play Store.
Raha tianao ny Super Mario Run na te hahalala bebe kokoa momba ity lalao ity ianao dia afaka mahita an'io ato amin'ity sokajy ity. Vaovao momba io lalao Nintendo io eo am-pelatananao, mba hahafantaranao bebe kokoa na hitondranao azy tsaratsara kokoa.
Ahoana no filalaovana Mario Bros amin'ny finday
Mario sy Sonic dia roa amin'ireo lalao tranainy indrindra izay manohy mitohy mihoatra ny 30 taona aty aoriana ...
Nintendo dia namokatra $ 1.000 miliara mahery miaraka amin'ireo lohateny amin'ny finday
Tamin'ny volana septambra 2016, natolotr'i Nintendo ny lalao finday voalohany, Super Mario Run, na dia tsy tonga aza izany tamin'ny voalohany raha tsy ...
Nintendo dia iray amin'ireo studio fanaovana lalao malaza indrindra eran-tany. Nandao anay nandritra ny volana maro izy ireo ...
Makà Super Mario Run amin'ny antsasaky ny vidin'ny 10 ka hatramin'ny 25 martsa
Raha tsy manisy fiheverana ny lalao / tambajotra sosialy navoakan'ny Nintendo talohan'ny Super Mario Run isika dia afaka mandinika ...
Andro vitsy lasa izay, niresaka momba ny lalao manaraka izay hamely ny Play Store isika amin'ny telovolana voalohany ...
Super Mario Run dia efa sintonina in-200 tapitrisa nefa tsy mitondra tombony
Volana vitsivitsy lasa izay taorian'ny nanombohan'ny Nintendo ny Super Mario Run ho an'ny Android sy iOS. Lalao voalohany tamin'ny ...
Novonoin'i Nintendo i Super Mario tamin'ity mpihazakazaka ity ho an'ny Android
Rehefa afaka nametraka sy nanandrana ny Super Mario Run ho an'ny Android, izay efa nolazaiko taminao fa tsy ...
Ny iray amin'ireo lalao andrasana indrindra amin'ny vanim-potoana, Super Mario Run for Android, dia azo alaina ao amin'ny ...
Super Mario Run dia efa manana daty famotsorana amin'ny Android: 23 martsa
ny Jose Alfocea hace 5 taona .
Telo volana mahery taorian'ny niantombohany manokana tamin'ny fitaovana Apple iOS, miandry ny…
Super Mario Run dia mahatratra 78 tapitrisa ny fisintomana, saingy 5% ihany no nividy azy
Sarotra ny miresaka lalao matanjaka tahaka ny iray amin'ireo kintana ...
Super Mario Run dia ho tonga amin'ny Android amin'ny volana martsa
Miaraka amin'i Pokémon GO, ny fanombohana ny Super Mario Run tamin'ny faran'ny taona lasa 2016 dia iray amin'ireo…